Xukuumada oo soo bandhigtay Hub Culus oo ay sheegtay in lagu qabtay falkii xalay lagu soo qabtay Wasiirkii hore ee aminga | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Hargeisa 30/05/2014 – (SDWO.COM) Wasiirka arimaha gudaha iyo taliyaha booliska ayaa si wada jir ah u soo bandhigay hub culus oo ah qorayaha rasaasta silsilada leh oo ay sheegeen in lagu soo qabtay hawgalkii dagaal ee ay ciidmada RRU du ku soo qabteen wasiir ku xigeenkii hore ee Amniga Cabdilaahi Abokor oo si adag isku difacay muod ilaa sacaad ahna daagaal dhexmaray isaga iyo ilaaladiisa oo dhan ah iyo ciidanka RRU da oo dhinac ah. Ilaa hada lamahayo warar madaxbanaan oo cadaynaya in hubkan guriga masuulkan lagu soo qabtay iyo in kale.
Dhawaaqa rasaasta oo guud ahaanba laga maqlayey daafaha kal duwan ee magaalada Hargeysa xalay saqdii dhexe ayaa dadka aad u cabsigelisay iyadoo loo qaatay inay tahay arinkii maalmahanba aadka looga werwerayey ee muranka u dhexeeya xisbiga kulmiye iyo golaha wasiirada ee Somaliland.
Xaaska Wasiirkii Aminga oo ka hadashay sidii loo soo weeraray ayaa sheegtay in odeygeeda CID du fariin qof u soo fartay la leeyahay waxa lagaa rabaa xarunta CID da hase yeeshee wuxuu uGu jawaab celiyey inay CID du soo maarto hanaanka sharci ee uu dalku leeyahay oo warqad samon ah loo keeno oo uu ku tago xarunta. Nasiib daro taas bedelkeedii waxay noqotay isla maalintii uu wasiirka madaxtooyada Xirsi uu dalka ku soo laabtay inuu amray in si degdeg ah loo weeraro oo la soo qabto. Waxaanay saxaafada madaxbanaan tustay sida gurigeedii dhamaan loo jejebiyey ee loo baadhay, loona qaatay wixii hanti dhextaalay, sida dahabkeeda, mobile dii, iyo computeradii iyo laptop yadii. Waxa kale oo ay marwadani sheegtay in iyada lafteedna ay ciidankii afka duubnaa ay qoriga dabadiisa ku garaaceen isla markaasna caruur 5 ah oo 9 jir uGu weynyahayna ay jugo gaadhsiiyeen.
Dadka siyaasada odorosa ayaa aad u naqdiyey talaabadan uu Xirsi qaaday ee uu nabadgelyada dalka uu ku khalkhalgelinayo, hadii ay tahay bay yiraahdeen nin la rabo in la soo xidho sifaha la doonaba ha lagu soo qabtee, waxay helikarayeen in isaga oo suuqa iska jooga ama dariiqa maraya rabshad la,aan la qabanlahaa.
Wararku waxay sheegayaan in nin ka mid ahaa ilaalada masuulkan la qabtay uu dagaalkaas foolka foolka ahaa uu xalay ku dhaawacmay oo uu ku dhiig baxay guriga dhexdiisa iyadoon mudo dhawaciisa la qaadin. Ninkan oo xabadi caloosha kaga dhacday ayaa la dhigay dhakhtarka wararkii u danbeeyay ee na soo gaadhayaan ay sheegayaan in ciidanku ay kala baxeen dhakhtarkii lagu dawaynayey iyadoo wararku sheegayeen in markaa ay la baxeen la rabay in dhiig lagu shubo, hase yeeshee warar aan la hubin waxay sheegayaan inuu muwaadinkaasi hada ku geeriyooday iskagoo ku jira gacanta ciidamda RRU da.